Ajjeechaa Abraar Fahaad: Barataan Baangilaadish sa'aatii afuriif reebame ture - BBC News Afaan Oromoo
Ajjeechaa Abraar Fahaad: Barataan Baangilaadish sa'aatii afuriif reebame ture
Goodayyaa suuraa Abraar Fahaad erga miidiyaa hawaasummaarrti mootummaa qeeqe booda ajjeeffameera
Barataan digrii jalqabaa Baangilaadish Abraar Fahaad Dilbata tare karaa maxxansa intarneetiitiin mootummaa waan qeeqeef doormii isaa keessatti sa'aatii hedduuf reebamuun ajjeeffamuusa namni ijaan argan BBC'tti himan.
Barattoonni biroo akka jedhanitti, barataan Abraar galgala sa'aatii lamatti doormii isaatii fuudhame yoo xiqqaate sa'aatii afuriif reebamaa tureera.
Doktorri reeffa Abraar qorate akka himeetti Abraar dargaggoo ganna 21 yoo ta'u, qaamni isaa baay'ee miidhamee akka ture BBC'f mirkaneesseera.
Abraar Yunivarsiitii biyyattii Daakaa jedhamutti barataa Injineeriingii ture. Miseensonni Liigii Chaatiraa Baangilaadish (BCL) hedduunis- kan damee paartii paartii Awaamii dargaggootaa ajjeecha kanaan walqabatee hojiirraa dhorkamaniiru.
BCL yeroo baayyee barattoota irratti dararsaafi miidhaa gesisuun himatama.
Goodayyaa suuraa Barattoonni Yunivarsiitii Baangilaadish ajjeechaa Abraar booda hiriira bahaniiru
Kaameraan doormii Abraar keessa tureen namoonni baay'een reeffa daraggeessa kanaa baatanii mulleesseera. Haaluma kanaanis poolisiin roggoosawwan BCL shan dabalatee, namoota sagal doormii keessa turan to'annaa jala oolcheera.
Gaafa Kibaxataa baay'inni namoota to'annaa jala oolanii 13'tti yoo gahu, amma shakkamtoonni jaha adamsamaa jiraachu poolisiin himeera.
Itti aanaa komiishiinaraa poolisii Daakaa, Munstaasiiruul Islaam barataan sun rukutamee akka ajjeeffame mirkaneessaniiru.
Misirroo abbaa warraa fuudhuuf gara mana misirriichaatti imalte
Barsiisaan amantii daddabarsa maallaqa seeraan alaan himataman
Miseensoonni LCB miidiyaa biyyaatti akka ibsanitti, Abraara erga "gaafatame" booda walitti hidhata paartii Islaamummaa waliin qabda jedhuun rukutameera.
Achi booda miidiyaa hawaasummaarratti dhimma walii qoodinsa bishaanii Hindii waliin jirurratti mootummaa qeeqee booda kan taateen kun mudate.
'Maaloo gara hospitaalaa na geessaa'
Barataan yunivarsiitii sanii maqaansaa akka hineeramne jechuun BBC'tti dubbate tokkos, Abraar erga reebameen booda Dilbata waaree booda sa'aatii 8'tti lubbuun ture jedheera.
"Abraariin kutaasaa lakkoofsa 2005 keessatti osoo lubbuun jiru argeeraan... baratoota gameeyyii biraa waliin ta'uun Abraariin baannee gadi buufneera. Yeroosanitti lubbuun jira ture, "Maaloo dafaa gara hospitaalaa na geessaa," jedhaa ture jedheera.
Barataan biraa bakka sana ture akka jedhetti, baratoonni walitti dhufuun aanga'oonni yunivarsiitichaa taatee mudate kanarratti miseensota LCB'tti tarkaanfii akka fudhatan gaafataniiru.
Goodayyaa suuraa Ajjeechaan barataa kana magaalatti keessatti hirirrii mormii akka bahamu godheera
Oduun ajjeechaa kanaa gaafa Wiixataa Magaalaa Daakaa fi magaaloota biraa keessatti hiriirrii mormii akka bahamu godheera. Baratoonni magaalaa guddittii hedduun daandii cufuun dhaadannoo qabachuun hiriira bahaniiru.
Hiriirrichis gaafa Kibxataa itti fuufun barattoonni namni yakka kana hojjatte adabbii du'aan akka adabamu gaafataniiru.
Baratoonni gameeyyii fi barsiisonnis hiriirichatti makamaaniiru. Ajjeechaan kunis biyya Baangilaadish magaalaatti keessatti naasuu guddaa uumeera.
"Barataan doormii isaa keessatti haala kanaan ajjeeffamuun waan fudhatama hin qabnedha," jedha Masuud pireezidaantiin Waldaa Barsiisotaa akka gabaasa bdnews24.com.
"Ajjeechaan Abraar Fahaad aanga'ootaaf nageenyummaa barattootaa eegisissuurratti sodaa akka qaban mirakaneesseera."
Barsiisaan amantii lammii Indiyaa Zaakir Naa'ik maallaqa seeraan alaa daddabarsuun himataman
Viidiyoo 'Addunyaarratti dhukkuba namoota 6 hin caalle qofa qabate'